पाेखरा १५ मंसिर- एउटा ठूलो कम्पनीको गेटको सामुन्नेमा एउटा प्रशिद्ध समोसाको पसल थियो । लन्चको समयमा अक्सर कर्मचारीहरु त्यहाँ गएर समोसा खाने गर्थे । एकदिन कम्पनीको एक म्यानेजरले समोसा खाँदा खाँदै समोसा बेच्ने व्यापारीसंग ख्याल ख्याल ठट्टाको मुडमा आएर बहश गर्न थाले ।
म्यानेजर साहबले समोसासंग सित भने ‘यार ! महेश्वर, तिमीले आफ्नो पसल धेरै राम्रोसंग मेन्टेन गरेको छौ तर के तिमीलाई लाग्दैन कि तिमी आफ्नो समय र ट्यालेन्ट समोसा बेचेर बर्बाद गरिरहेका छौ ? सोच यदि तिमी म जस्तै यो कम्पनीमा काम गरीरहेको हुन्थ्यौ भने आज कहाँ हुन्थ्यौ, हुन सक्थ्यो आज तिमीपनि म जस्तै म्यानेजर हुनेनै थियौ ।
आज तपाईं महिनाको ४० हजार कमाउनु हुन्छ र म महिनाको डेढ लाख , तर यो कुराको कारणले मैले आफ्नो कामलाई राम्रो भनिरहेको छुइन, यो त म बच्चाहरुको कारणले भनिरहेको छु । अलिकती सोच्नुस !
यो कुरा सुनेर समोसावलले धेरै सोचेर मात्रै जवाफ फर्काए ‘सर ! यो मेरो काम तपाईको काम भन्दा धेरै गुणा राम्रो छ , १० वर्ष पहिला म जब टोकरीमा समोसा बेच्ने गर्थे त्यतिबेला देखिनै तपाइको नोकरी लागेको थियो । त्यतिबेला म महिनाको एक हजार रुपैया कमाउथे तपाइको तलब १० हजार थियो । गएको १० बर्ष भित्रमा हामी दुवै जनाले धेरै मेहनत गर्यौ ।
तपाईं सुपरभाइजरबाट मेनेजर बन्नुभयो र म त्यो टोकरीमा समोसा बेच्दा बेच्दै प्रसिद्ध पसल सम्म आइपुगे । आज तपाईं महिनाको ४० हजार कमाउनु हुन्छ र म महिनाको डेढ लाख , तर यो कुराको कारणले मैले आफ्नो कामलाई राम्रो भनिरहेको छुइन, यो त म बच्चाहरुको कारणले भनिरहेको छु । अलिकती सोच्नुस ! मैले यो काम धेरै कम कमाइबाट काम शुरु गरेको थिए , तर मेरो बच्चाहरुलाई यो सब झेल्नुपर्दैन ।
उसकाे भनाइः मेरो पसल मेरो छोराहरुलाई मिल्नेछ , मैले जिन्दगीमा जुन मेहनत गरेको छु त्यसको लाभ मेरो बच्चाहरु ले उठाउनेछन । जबकी तपाइको जिन्दगीभर को मेहनत को लाभ तपाइको मालिकका बच्चाहरुले उठाउनेछ ।
अब तपाइले आफ्नो बच्चाहरुलाई सिधै आफ्नो पोस्टमा ल्याएर राख्न सक्नुहुन्न , उसलाई पनि तपाई जस्तै जिरोबाट शुरु गर्नुपर्नेहुन्छ र आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा त्यही पुग्नेछ जहाँ अहिले तपाईं हुनुहुन्छ , जबकी मेरो छोराले बिजनेशलाई यहाँबाट माथी अझै लिएर जानेछ र आफ्नो कार्यकालमा हामी सबैभन्दा अगाडि निस्किएको हुनेछ ।
अब तपाई आफैं भन्नुस कसको समय र ट्यालेन्ट बर्बाद भइरहेको छ , ?
म्यानेजर सर ले समोसा बेच्नेलाई दुई समोसा को ३० रुपैया दिए र केही नबोली त्यहा बाट चुपचाप निस्किए ।
यसर्थ मित्रजनहरु , जसलाई आफ्नो “काम” मा भरोसा हुन्छ उसले नोकरी गर्दछ तर जसलाई “आफुमा” भरोसा हुन्छ त्यसले व्यापार गर्दछ । अरुको कामबाट स्वतन्त्रता कहिल्यै मिल्दैन, अरुबाट परिचालित हुनुपर्ने हुन्छ, कहिल्यै रचनात्मक (क्रीएटिभ) बन्न सकिँदैन हमेशा रिपिटिएटिभ भएर समय र उमेरलाई बर्बाद गरीरहेको हुन्छ । आउनुहोस् हामी सबै मिलि देशलाई समृद्ध बनाउनु छ। काम खोज्ने होइन काम दिने बनौं।